Loharan-jaridaina, haingon-trano ary fialan-tsasatra | Bezzia
Loharano an-jaridaina, haingon-trano ary miala sasatra
Maria vazquez | 04/06/2021 18:00 | Decor
Ny loharano dia nandritra ny tantara a sombin-javatra fototra ao amin'ny zaridaina. Singa haingon-trano izay tsy manampy ny toetran'izy ireo fotsiny, fa manampy amin'ny famoronana tontolo milamina sy taratra koa noho ny fimonomononan'ny rano.
Amin'ny fahavaratra maina toy ny antsika, ny loharano ao anaty zaridaina dia fitaovana iray ihany koa hitondra freshness amin'ity toerana ivelany ity. Ny antony ilana asio loharano ao an-jaridainanaokoa maro izy ireo. Betsaka ny antony tsy maintsy raisinao mba hisafidianana iray.
1 Ireo lafin-javatra teo aloha tokony ho raisina
2 Karazana loharano zaridaina
2.1 Amin'ny endriny / fitaovana
2.2 Ho an'ny asany
Ireo lafin-javatra teo aloha tokony ho raisina
Tsy hamina mialoha na inona na inona ianao raha manomboka mitady loharano zaridaina nefa tsy namakafaka teo aloha hoe aiza no tianao hametrahana azy ary inona ny toetra tadiavinao ao. Ny fahafaha-manao eny an-tsena dia tsy misy farany ary ny fanontanianao fanontaniana vitsivitsy alohan'ny hanombohanao dia hanafaingana ny fikarohana nataonao.
Aiza no hametrahanao azy? Eo afovoan'ny zaridaina sa amin'ny rindrina?
Tianao ve ny loharano miasa na ny maodely efa vita mialoha?
Inona no fomba itadiavanao ny zaridainanao? Klasika, ankehitriny, Mediteraneana, minimalist, voajanahary ...
Zava-dehibe aminao ve ny feon'ny loharano? Na ny tahan'ny fikorianan'ny rano na ny haavon'ny jet air dia hisy fiantraikany amin'ny habetsaky ny tabataba avy amin'ilay loharano.
Azonao ampifandraisina amin'ny rano mandeha ve izy io? Vonona ny hanao asa ve ianao sa aleonao mampiasa karazana rafitra miasa hafa?
Ny famaliana ireo fanontaniana ireo dia hanampy anao handrindra ny karazana endritsoratra mety indrindra ho an'ny zaridainanao. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny manivana ny fikarohana ataonao ary mahatratra ireo loharanon'ny zaridaina izay mahaliana anao haingana kokoa. Avy eo, eo anelanelan'ny tena azo atao, ny endrika sy ny teti-bola dia hanampy anao amin'ny fanapahan-kevitra farany.
Karazana loharano zaridaina
Raha nanandrana namaly ireo fanontaniana ianao dia tsy ho sarotra aminao ny maminavina fa misy lafin-javatra maro azontsika jerena mba hanasokajiana ireo loharanon'ny zaridaina amin'ny karazany samihafa. Na izany aza, anio ihany dia hifantoka amin'ny roa, izay heverintsika ho zava-dehibe indrindra: ny fahombiazana sy ny fitaovana.
Amin'ny endriny / fitaovana
Ny fitaovana na karazana fitaovana nanaovana loharano zaridaina fantaro ny fombanao. Ny ankamaroan'ireo loharano fanao mahazatra dia vita amin'ny vato, ary koa ireo an'ny fomba mediteraneanina dia mahazatra fa manolotra singa vita amin'ny seramika izy ireo.
Loharano vato: Ny loharano vato voajanahary dia nampiasaina nandritra ny tantara ho toy ny singa mifantoka ao amin'ny zaridaina. Ireo sanganasa voasokitra sy misy endrika sokitra dia nitazona ny afovoan'ny zaridaina kanto indrindra. Ireo manana siny na fitoeran-drano, ho azy ireo, dia nanaingo ny rindrin'ny trano ambanivohitra lehibe araka ny fomban-drazana. Samy miavaka amin'ny vidiny lafo izy roa ireo.
Loharano vita amin'ny tile: Ity karazana loharano ity dia mazàna vita amin'ny beton ary voaravaka taila. Ao amin'ny kolontsaina Arabo dia mampiseho endrika boribory sy motif maro loko izy ireo; Ireo no loharanom-pahalalana hitanay amin'ny ankapobeny any atsimon'i Espana. Na izany aza, azo atao ny mamorona karazana endritsoratra hafa avy amin'ny tile, endritsoratra miaraka amin'ny hatsarana maoderina kokoa. Ahoana? Mampiasa tsipika mahitsy sy taila amin'ny feo mainty sy fotsy.
Loharano metaly: Rehefa mandeha ny fotoana, ny loharano vy dia mahazo patina mampiavaka azy ireo izay manome azy ireo toetra. Amin'ny metaly dia afaka mahita loharano sandoka miaraka amin'ny hatsarana mahafinaritra ianao, fa ny hafa kosa noforonina tamin'ny vy tsotra izay mahazo hatsarana maoderina kokoa ary mifanaraka tanteraka amin'ny zaridaina minimalista na avy any atsinanana.
Ho an'ny asany
Ny lafiny iray tena lehibe tokony harahina dia ny karazana fiasan'ny loharano. Ny ankamaroan'izy ireo dia manana motera elektrika afaka mifandray amin'ny takelaka ianao na mihodina amin'ny bateria ivelany na panneaux solaires. Tadidio fa miankina amin'ny toerana tianao hametrahana ilay loharano, ny fampifandraisana azy amin'ny tamba-jotra elektrika dia mety mitaky asa fanampiny ary mampiakatra ny vidiny.
Karazan-loharano inona no tianao handravahana ny zaridainanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Loharano an-jaridaina, haingon-trano ary miala sasatra
Faharetan'ny kabary amin'ny ankizy
Inona no hohanina hanamaivanana ny PMS